Indawo yokulala yaseSuncity Salitre I (3A)
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguSuncity
USuncity unezimvo eziyi-955 zezinye iindawo.
Igumbi elinye lokulala kwiZiko laseMalaga. Ifakwe ngokupheleleyo ngomhombiso ogqibeleleyo ochwayitileyo nonemibalabala. Yonke into oyifunayo inokufumaneka ngaphakathi kwerediyasi enkulu yemizuzu engama-20 yokuhamba, iilwandle, imivalo, iivenkile, izithuthi, njl.
Igumbi lokulala leSuncity Salitre 1 (3A) ligumbi lokulala eliqaqambileyo nelisebenzayo elinegumbi lokuhlala-ikhitshi kwindawo yaseMalaga elungele iholide edibanisa ukuthenga kunye nokutyelela iimyuziyam. Igumbi lokuhlala kunye negumbi lokulala lineTV yescreen esicaba kwaye kukho iWIFI yasimahla. Le ndlu iza ne-air conditioning, ikhitshi eligcweleyo, izixhobo zoku-ayina kunye nomatshini wekofu.
Isikhululo saseMaría Zambrano sikumgama nje weemitha ezingama-400 apho indawo yokuthenga yaseVialia ikwakhona.
I-Contemporary Art Centre (CAC) i-300 yeemitha ukusuka kumagumbi kwindlela eya eSoho nasePlaza de la Marina, apho iCalle Larios iqala khona.
I-Malaga Cathedral ingaphezu nje kwekhilomitha kwaye iMyuziyam yasePicasso ikumgama oziikhilomitha ezi-1.5 ukusuka kumagumbi okuhlala.
Ifakwe kwindawo eneempawu zesixeko saseMalaga, embindini wesixeko apho, umgama nje weemitha ezingama-300, ungaya kwisikhululo saseMaría Zambrano kunye neziko lokuthenga laseVialia.
Unako kwakhona ukuya kwiPort of Malaga apho kukho iindawo zokutyela ezininzi kunye neevenkile 1 km kude nendlu (imizuzu eyi-15 ngeenyawo).
Ukuba ufuna ukutyelela iimyuziyam zesixeko, unokuthatha uhambo lwemizuzu eyi-15 ukuya kwiziko lembali lesixeko. Eyona venkile ikufutshane yiMercadona, kumgama oziimitha ezingama-350 (imizuzu emi-4 ngeenyawo).
Umbuki zindwendwe ngu- Suncity
Umnxeba omnye okanye i-imeyile iya kukwenza uqhagamshelane nathi ngayo nantoni na oyifunayo.
Inombolo yomthetho: 2017045645
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-R1714